Halkuu wada hadalka Xuud iyo Biixi ku danbeyn doonaa? | KEYDMEDIA ENGLISH
Halkuu wada hadalka Xuud iyo Biixi ku danbeyn doonaa?
Taliyaha ciidanka lugta Genral Maxamed Biixi Tahliil, ayaa shalay la kulmay Jeneral Xuud, oo tabasho weyn ka qaba nidaamka fedraalka, waxaase la is weydiinayaa, halka ay ku danbeyn doonaan, heshiisyada horu-dhaca ah ee ay gareen.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Markii ugu horreysay Xuud ayaa oggolaaday, inuu wada hadal la furo Villa Soomaaliya, si loogu qanciyo inuu raalli ka noqdo doorashada ka dhaceysa Baladweyne, isla markaana uu culeyska uga dabciyo, maamulka Guudlaawe ee Hirshabelle.
Waxaa si loo soo xiro galiyo, loo diray Jeneral Biixi oo ay saaxiibo hore ahaayeen, sidoo kalana ah nin qabiilka u nugul, oo si gaar ah ugu shaqeeya, hoggaanka waqtigiisu dhamaaday, oo ay qoys dhaw yihiin.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda, rajo badan kama qabaan, in la xallin doono tabashada Jeneral Abuukar Xuud, oo ah nin aamisan in reerkiisa lagu dulmiyey nidaamka fedraalka, waana kuwa sheegaya, in Villa Soomaaliya aysan daacad ka ahayn wada hadalka lala yeelanayo Xuud.
Waxey sheegayaan in Xuud uu ku dhacay dabin, isla markaana la doonayo in la shirqoolo, oo la keeno xamar, halkaasna lagu xirro, iyadoo lagu eeddeynayo inuu carqalad ku yahay, hannaanka dowladnimo ee dalka.
Sida ay qubaradu qabaan, Kama go'na Villa Soomaaliya, in ay ka gar baxdo Xuud, waxa uu tabanayana ay ka qanciyaan, keliya waa kuwa doonaya in ay maaweeliyaan, si uu gacantooda ugu soo dhaco, waana mid ku danbeyn doonta, halkii la mariyey Abuu Mansoor Roobow, iyadoo garabka ugu weyn laga helayo dadka reer ahaan u xiga, oo laga xusi karo, Madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Yuusuf Dabageed, Cali Cabdulaahi Cosoble MD hore ee Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan.
Waxaa inta uu socda wada hadalka, sidoo kale Baladweyne la geyn doonaa ciidamo fara badan, kuwaa oo xamar laga wadayo, si ay u kororta quwada ciidan ee ay Villa Soomaaliya ku leedahay magaaladaas, waxaana ciidankaas la dajin doonaa fariismo ku dhaw, kuwii Xuud ciidankiisa ay ku lahaayeen duleedka Baladweyne, oo hadda lagu qancinayo in ay ka soo baxaan.
Qorshaha Xuud lagu shirqoolayo ayaa waxaa ka danbeeya Fahad iyo Farmaajo, kuwaa oo cabsi ka muujinaya inuu jeneralku caqabad ku noqdo, kuraasta ay ku boobayaan Baladweyne, maaddaama Muuse Suudi iyo mucaaradka ay ku hor gudban yihiin kuraastii ay Jowhar ku boobi lahaayeen.
Jeneral Abuukar Xuud, oo ka mid ahaa, saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, ayaa dalka ku soo soo noqday dabayaaqadii sanadkii 2018- ka, isagoo billawgii 2020, ku dhawaaqay kacdoon ka dhan ah maamulka Hirshabelle, waxaana ciidamo taabacsan, ay fariisimo ka sameysteen duleedka Baladweyne, taas oo dhowr jeer u diidday Guudlaawe, inuu gaaro magaaladaas, waxaase iminka shaki ballaaran la galinayaa, halku ay ku danbeyn doonaan, qorshihii uu xusul duubka ugu jiray mudada 2- da sano ahayd, iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed intaba.